Ander Herrera oo u dagaali doona mustaqbalkiisa Manchester United – Gool FM
Zinedine Zidane oo ka hadlay haddii Kooxdiisa Real Madrid ay u dhaqaaqeyso Christian Eriksen ama Donny van de Beek
Shaxda rasmiga ah kulanka ee West Ham United iyo Manchester United oo la shaaciyey… (Yuu ku soo bilaabay macallin Ole?)
Drogba oo ka hadlay abaal-marinta Ballon d’Or 2019 & Xiddigaha ku guuleysan kara
“Waxaan ahayn kuwa aan wax naxariis ah lahayn kulankii Watford” – Pep Guardiola
Conte oo sharaxaad ka bixiyay sababta ka dambeysay guushii ay xalay kaga gaareen Milan kulankii Derby di Milano
Ander Herrera oo u dagaali doona mustaqbalkiisa Manchester United
Kaafi December 20, 2016
(Manchester) 20 Dis 2016. Ander Herrera waxa uu ballan ku galay in uu u dagaalami doono booskiisa Manchester United oo uusan dhayalsan doonin fursada uu haatan haysto.
Khadka dhexe waxa uu laf dhabar ka noqday shaxda Jose Mourinho isaga oo lix kulan oo xiriir ah ku soo bilowday Premier League-ga.
Herrera oo ay da’diisu tahay 27, waxaa uga haray qandaraaska uu kula joogo United laba sano iyo bar laakiin, waxa uu dareemayaa awooda kooxda ee ah la soo saxiixashada hibooyinka dunida ugu sarreeya in ay ka dhigeyso ciyaaryaha walba amaan darro in uu dareemo.
Mar ay weydiisay INSIDE UNITED bal in uu doonayo waqti dheer in uu joogo United waxa uu yiri: “Haa, laakiin ma ogaan kartid maxaa yeelay hadii aan rabo u ciyaaridda United waxaa lagaa doonayaa si wanaagsan in uu u dheesho maxaa yeelay United waa kooxda ugu weyn England.
“Kooxda waxa ay leedahay baaxadda ay ku keeni karto ciyaaryaha walba halkan markaa waa in aad mar walba heerkaaga ugu sarreeya joogtaa hadii aad rabto u sii ciyaaridda kooxda.
“Ma fududa laakiin waxaan rajeynayaa in aan awoodo waana u dagaali doonaa.”
Conte oo qishay in Chelsea saxiixyo cusub qorsheneyso
Costa oo heshiis cusub iyo mushaar qaali ah lagu abaammarin doono